အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်•ရွှေ၊ ရေနံ၊ Forex နှင့် Crypto •စမ်းသပ်မှုများနှင့်သုံးသပ်ချက်များ
ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏စီးပွားရေးပုံစံသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားငွေကြေး၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် cryptocurrencies ၏ဘဏ္financialာရေးစျေးကွက်များတွင်ပါဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ရောင်းဝယ်ရေးစက်ရုပ်များကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သင်၏ဘဏ္financeာရေးနှင့်အိုင်တီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုများမလိုအပ်ပါ။ ဒီတော့ကုန်သွယ်ရေး algorithms ဟာသင့်ရဲ့အရင်းအနှီးကိုအသိဥာဏ်နဲ့ဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်ပါစေ၊ အဲဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီ။
ကြင်နာမှုဖြင့်၊ သင့်မေးခွန်းများကို လမ်းညွှန်ပြီး အဖြေပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်သည် စုဆောင်းထားသော အမြတ်များကဲ့သို့ အရေးကြီးကြောင်း သတိပြုပါ။ သင်ဆုံးရှုံးရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်ပမာဏကိုသာ မြှုပ်နှံပါ။ ၎င်းတို့၏ ဗျူဟာကို နားလည်ရန် သေးငယ်သော အရင်းအနှီးဖြင့် အဆိုပြုထားသော စက်ရုပ်များကို စတင်စမ်းသပ်ပါ။
သမ္မာသတိရှိရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက် passive ဝင်ငွေကိုထုတ်လုပ်ပါ။
စက်ရုပ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေး အခွင့်အလမ်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း။
ကုန်သွယ်မှုသည် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အခွင့်အာဏာအဖြစ်မှ ရပ်စဲသွားသောကြောင့် ကုန်သွယ်စက်ရုပ်များသည် အင်တာနက်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤစက်ရုပ်များသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများကိုယ်စား အလိုအလျောက် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် ရေပန်းစားလာကာ တန်ဖိုးရှိသောအချိန်များကို သက်သာစေပါသည်။ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုများစွာရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားကုန်သွယ်ဘော့တ်များကို အခြားအရာများထက် ပိုမိုစမ်းသပ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အကြံပေးပါသည်။
XAU / USD အတွဲကိုစွန့်စားမှုနည်းပါးသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရေတိုရေတိုရေတိုဗျူရိုနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဦး ခေါင်းခွံရွှေစျေးကွက်ထံအပ်နှံ။
cryptocurrency စျေးကွက်နှင့် အဓိကအားဖြင့် Bitecoin BTC ကို စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုများဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
2022 တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
AutoTrade Forex သည်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးစျေးကွက်အခြေပြုကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ Autotrade Forex ကို ၂၀၂၁ နွေရာသီတွင်ရရှိနိုင်သည်။
ဒါဟာရေနံစျေးကွက်ရောင်းဝယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Autotrade Oil သည်ရေနံတစ်စည်၏စျေးနှုန်းပေါ် မူတည်၍ အလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Fin 888 သည် fiat ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုအပေါ်အခြေခံသည့် အင်ဒိုနီးရှားကုန်သွယ်စက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ Fin888 သည် တည်ငြိမ်သော စက်ရုပ်ဖြစ်သော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည် နည်းပါးသည်။Autotrade Gold.
API နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto တွင် 18 စက်အပါအဝင် စက်ရုပ်2ကောင်၏ဂေဟစနစ် Binance. အခြားသော ဘော့တ်များကို ချိတ်ဆက်သွားပါမည်။ broker Equiti ထိန်းချုပ်ထားသည်။
✅ FlashBot၊ FlashCoin...
EUR/USD အတွဲကို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် လည်ပတ်မှု၏ အဓိကမုဒ် SmartXBot တိုတောင်းသောရာထူးများ၏လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ATG ထက် ထိရောက်မှုနည်းသည်။
Kucoin Crypto စက်ရုပ်များ
အကောင်းဆုံးလဲလှယ်မှုတစ်ခုသည် လိုချင်သောငွေကြေးအတွဲများအလိုက် စက်ရုပ်ဗျူဟာ ၄ ခုကို ပေးသည်။
Fiat ငွေကြေး၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် crypto ဖြင့် ငွေပေးချေမှုဖြင့် ရွှေနှင့်စိန်များဝယ်ယူခြင်းစနစ်။
အင်ဒိုနီးရှားကုန်သွယ်စက်ရုပ်က ရွှေဈေးကွက်ကို အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်။ အမြတ်ခွဲဝေမှုစနစ် ကြိုက်တယ်။ Smartxbot.
အင်ဒိုနီးရှားကုန်သွယ်စက်ရုပ်မှာ crypto စျေးကွက်ကိုကုန်သွယ် broker Lotus International
EUR / USD စုံတွဲကိုရောင်းဝယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Coved သည်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အဆင့်မြင့်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာစုံတွဲကိုစွန့်စားမှုနည်းပါးသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရေတိုရေတိုရေရှည်မဟာဗျူဟာဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ငွေကြေးစုံစုံကိုရောင်းဝယ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Elitrob သည် Forex စျေးကွက်ကိုအမြဲတမ်းလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးအဓိကကျသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်များနှင့်မြင့်မားသောကုန်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောareasရိယာများကိုရှာဖွေသည်။
၎င်းသည်ငွေကြေးများစွာနှင့် crypto အတွဲများစွာကိုကုန်သွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
❌ Bit စက်ရုပ်
ကြော်ငြာကိုအခြေခံသည့် cashback စနစ်။
❌ AI စျေးကွက်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည် ၁၂ ယောက်၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်နေ့စဉ်ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကိုအထူးပြုသည့်စက်ရုပ် ၃ ခုကိုရှာဖွေပြီးအဓိကငွေကြေးငွေကြေးကိုရောင်းဝယ်ပါ။
အချို့သောကုန်သွယ်စက်ရုပ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း။
တချို့က စစ်တယ်။ ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ် အခြားသူများက ကျွန်ုပ်တို့အား အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည်ဟု မထင်ပါ။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်နီးကပ်စွာ လိုက်နာထားသော ကုန်သွယ်စက်ရုပ်များ စာရင်းတွင် မကုန်ခန်းနိုင်သော စာရင်းဖြစ်သည်- Smart Evo၊ Maestrem၊ Goldမိုင်း၊ Pipskiller၊ RoyalQ၊ BTS၊ Fortune8၊ RoboTop၊ King Trader၊ LVBet၊ Algate၊ Alyssa၊ သွက်လက်မှု၊ အတန်းအစား VIP၊ Ferrari၊ Ricabot၊ Vega88၊ Euro Miner၊ Millionaire Prime၊ Dragon၊ DGP Bot၊ Alphabet၊ Smartech၊ IQSmart၊ SpecialS ၊ Ninebot၊ ISM၊ Viggo၊ AIC Genius၊ Anti MC၊ Ximple Trade၊ Crown၊ ER၊ MR X999၊ GTA88၊ Jaderock 78၊ RX1၊ Pro-100၊ Notheory၊ Sun Star Indo၊ Infinity Gold၊ GBPUSD၊ Index Scalper၊ Diamond၊ Bibot၊ ISM၊ GatotkacaFX၊ ProMax၊ Copet ...
ဤကုန်သွယ်စက်ရုပ်များ (အလိမ်အညာများ / Ponzi) ကိုရှောင်ပါ- EvoTrade၊ Eureka၊ Mark AI၊ King Coin၊ Antares၊ Sparta၊ Shigeru၊ King Gold၊ Mandaka၊ Voltnexo၊ LogicPro၊ Jokermoon၊ Tron Life၊ Zeppelin၊ HTFox၊ Skidn ...
အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်များသည်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောစနစ်များဖြစ်ပြီး ၄ င်းတို့၏ကုန်သည်အသင်းများမှသတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များ (သို့) အချိန်ဇယားအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်စက်ရုပ်သည်လူ့စိတ် ၀ င်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမှားများကိုဖယ်ရှားပေးသည့်လူသားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိပဲဘဏ္marketsာရေးဈေးကွက်တွင်အလိုအလျောက်နေရာယူသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောစွန့်စားမှုနှင့်ပြန်လာနိုင်မှုအချိုးအစားဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့သောအမြတ်အစွန်းရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဤအဆင့်မြင့်သော algorithms သည်စျေးကွက်အားအမြဲတမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ သင်္ချာ၊ စာရင်းအင်းနှင့်စျေးကွက်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများကို အခြေခံ၍ ညွှန်ကြားချက်များကို အသုံးပြု၍ ကောင်းမွန်သောရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု (အများဆုံး ၃% လျှော့ချခြင်း) ဖြင့်စျေးကွက်ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။ ပညာသင်ဆုရှင်။
DigiPrime / Pansaka / PantheratradeMeta Capital သည် အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင် မတူညီသော ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် မိတ်ဖက်များစွာကို ဖန်တီးထားသကဲ့သို့ပင်။
စက်ရုပ်တစ်ခုစီတွင် ပစ်မှတ်စျေးကွက်အပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို စီးပွားရေးသတင်းများအရ အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ကာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုန်သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
အောင်မြင်သောရေရှည်ရလဒ်များကိုသေချာစေရန် ဤစဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Forex စျေးကွက်သည် အလွန်လျင်မြန်ပြီး အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်မြှင့်တင်မှုအဆင့်သည် အယ်လဂိုရီသမ်များ ထိပ်တွင်ရှိနေစေပြီး အရာအားလုံးသည် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်လောကသို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်ကိုယူပါ။ သင်မလိုအပ်သောငွေကိုအလောင်းအစားလုပ်ပါ။ သင်၏ကန ဦး လောင်းကြေးငွေမကုန်မှီကုန်သည်များသည်သင်၏နိုင်ငွေကိုကောက်ယူပါ။ အပိုဆု
စက်ရုပ် / Crypto / Stacking.
ဤသည်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ကွဲပြားစေပြီး Passive Income ကို ဖန်တီးရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဗျူဟာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည် ။
ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုပါ brokerသက်ဆိုင်ရာ။
အမြတ်အစွန်းရရှိပြီးနောက်အဓိကဖလှယ်မှုတွင် cryptocurrencies ကိုဝယ်ပါ (Binance, Coinbase သို့မဟုတ် Crypto.com).
ကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် ကိုင်ထားပါ။ cryptomonnaies လစဉ်အတိုးနှင့်/သို့မဟုတ် သင်၏ crypto ကဲ့သို့သော နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူရန် Binance Card ကို အစားအသောက်စျေးဝယ်၊ ဆံပင်အလှပြင်၊ ဓာတ်ဆီ၊ စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်အပန်းဖြေမှုအတွက် ...
မေးခွန်း ၄ ခု၊ အဖြေများ
အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်လူကြိုက်များသောချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကုန်သွယ်ပြင်သစ်တွင်ထားရှိအမိန့်၏ထက်ဝက်နီးပါးနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထားရှိအမိန့်၏ 70% ရှိပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ထိရောက်မှုကိုရှင်းလင်းစွာပြသသည်။
- ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းတို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်၊ စျေးနှုန်းများကို စျေးကွက်ဝယ်လိုအားနှင့် အဆက်မပြတ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊
- စျေးကွက်သည်ပိုမိုများပြားလာသည်၊ ဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်
- သူတို့သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကုန်သွယ်စရိတ်လျှော့ချသည်
ယနေ့မည်သည့်လူစားမျိုးသည်အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်များကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားကြသနည်း။
ယနေ့တွင်၊ အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ်များကို အသုံးပြုသည့် အန္တရာယ်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ၀င်ငွေရင်းမြစ်တွေကို ကွဲပြားအောင် လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။
အပိုဝင်ငွေရရှိရန် တစ်ဦးချင်းစီ ကုန်သွယ်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်လိုကြသည်။ အရောင်းအ၀ယ်စက်ရုပ်များသည် သင့်အား ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်မှုများစွာမပြုလုပ်ဘဲ ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုသောကြောင့် ဤကိစ္စတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်ကိုအသုံးပြုသောကုန်သည်များတိုးပွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည်။ လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တင်ပြသောစက်ရုပ်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုသည်ဝင်ငွေများစွာရရှိရန်ခွင့်ပြုနေစဉ်အလုပ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ကုန်သည်များသည်အမြတ်အစွန်းနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချက်ပြမှုများကိုပေးသောအရည်အသွေးမြင့်သောစက်ရုပ်များကိုရွေးချယ်ရန်ဂရုပြုကြဆဲဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏အရင်းအနှီးကိုပြောင်းလဲရန်အခွင့်အလမ်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေကြသည်။ အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်စက်ရုပ်များသည်ဤပရိုဖိုင်းအမျိုးအစားကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စက်ရုပ်ကောင်းများကိုတွေ့သောအခါ၎င်းတို့သည်သိသာသောပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာတင်ပြထားသည့်စက်ရုပ်များကိုမှတ်ပုံတင်ရာတွင်သင့်အားကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်သည်သင်ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့သောစက်ရုပ်များကိုသာပြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိနေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်တစ်ခုစီဟာစွန့်စားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ၊
သင့်အားအလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်ဖြင့်စတင်ရန်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပေးသည်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်ရောက်ရှိလာသည့်အခါမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာများမပါ ၀ င်သောအရာများကိုအတိအကျသိရှိရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်ဝန်းကျင်ရှိသူများတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုရန်အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ site နှင့်အနည်းငယ်တူပါသည် Robots-Trading.fr။ သင်၏စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသိရခြင်းမှာကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့်ကျေနပ်အားရမှုပင်ဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်မှုနှင့် cryptocurrencies တို့သည် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက အမှန်တကယ် စိတ်အားထက်သန်လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤစျေးကွက်အသစ်များနှင့် ၎င်းတို့မှရရှိလာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်အသစ်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် နာရီပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ဤဝါသနာကို သင်နှစ်သက်နိုင်စေရန် မျှဝေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီနေ့ကုန်သွယ်ရေးစက်ရုပ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ဤစက်ရုပ်၏အခြေအနေသည်စျေးကွက်တိုးတက်မှုများအရကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့စျေးကွက်များမှာမူတည်ငြိမ်သော်လည်းအချို့မှာပိုမိုသိသာထင်ရှားသောလမ်းကြောင်းများ၊ မတည်ငြိမ်မှုများပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်။
Range-type trading robots များသည် တည်ငြိမ်ပြီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော စျေးကွက်များကို ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ ဤကုန်သွယ်စက်ရုပ်များသည် နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်တစ်ခုအပေါ် မူတည်သည်။ (စျေးနှုန်းများ ပြောင်းလဲလာမည့် နည်းလမ်းကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန် စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ခွင့်ပြုသည့် အမှတ်စဉ်တစ်ခု). Range အမျိုးအစားကုန်သွယ်စက်ရုပ်သည် အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးပြီး စျေးကွက်အလွန်အဝယ်ဖြစ်လာသောအခါ သို့မဟုတ် ရောင်းလွန်သွားသောအခါတွင် အဝယ်နှင့်ရောင်းချခြင်းများကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီလိုအရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်အမျိုးအစားဟာအဓိကလမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်တဲ့ရာထူးတွေကိုဖွင့်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာထုတ်လွှင့်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်စက်ရုပ်သည်အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးဖွင့်သည်။ သတိပြုရန်မှာ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်မဆန့်ကျင်သောအချက်ပြမှုများကိုသာမှတ်သားသည်။
၎င်းတို့သည်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ဘဏ္institာရေးဌာနများကဖန်တီးကြသည်။ သူတို့ကအမိန့်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲလုပ်နိုင်တယ်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်ကုန်သွယ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုံမှန်ပုံမှန်အတက်အကျများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။